Ligue 1 | Mustaqbal Radio
Home - Ligue 1
Unai Emery oo tilmaamay Tababaraha badali doono hadii uu ka tago shaqada Paris Saint-Germain.
Tababaraha kooxda PSG Unai Emery ayaa sheegtay in Arsene Wenger uu noqon karo macalinka kooxda Paris Saint-Germain mustaqbalka. Jimcihii, tababaraha Arsenal ayaa shaaca ka qaaday inuu go’aansaday inuu ka tago Emirates Stadium dhamaadka xilli ciyaareedkan, isagoo 22 sanno kuso qaatay North London. Dhanka kale Emery, ayaa la rumeysan yahay inuu ku jiro waqigii ugu dambeyay Parc des Princes sababo la ...
Gianluigi Donnarumma oo ku wajahan horyaalka Fransa.
Goolhaye Gianluigi Donnarumma ayaa lala xiriirinayay inuu xagaaga u dhaqaaqayo Paris Saint-Germain. Wakiilka 19 jirka ah Mino Raiola ayaa la kulmay kooxda heysata horyaalka Faransiiska si uu u soo jiito dookhiisa macmiilkiisa, sida laga soo xigtay majaladda France Football. PSG ayaa lagu soo waramayaa inay raadineyso bedelka goolhaye Alphonse Areola, iyadoo Donnarumma uu yahay mid ka mid ah musharixiinta ay ...
Javier Pastore oo ka hadlay mustaqbalkiisa Paris-Saint Germain.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Paris Saint-Germain Javier Pastore ayaa qirtay inuu weli hubin hadii uu ka tagayo kooxda heysata horyaalka Ligue 1 dhamaadka xilli ciyaareedkan. PSG ayaa ku guuleysatay horyaalka Faransiiska iyadoo 7-1 ay kaga badisay kooxda horyaalka difaacaneysa ee Monaco habeenkii axada. Xiddiga reer Argentine ayaa ku dhibtooday inuu si joogto ah u ciyaaro xilli ciyaareedkan, waxaana si aad ...